मलेसियाबाट आयो अर्को दु:खद खबर ! पेनाङ्गमा यी नेपाली युवाले गरे आ’त्मह’त्या – PathivaraOnline
Home > प्रवास > मलेसियाबाट आयो अर्को दु:खद खबर ! पेनाङ्गमा यी नेपाली युवाले गरे आ’त्मह’त्या
admin February 5, 2020 प्रवास	0
मलेसियाको पेनाङ्ग राज्यमा रोल्पा जिल्लाका गङ्गादेब गाउँपालिका २ डाडागाउ का कारण क्षेत्रीले आ’त्मह’त्या गरेका छ्न । पब्लिक प्याकेजेज कम्पनी मा कार्यरत २३ बर्सिय किरण जनावरी २८ तारिख कम्पनीको होस्टल नजिकै तामान पलाङ्गीको आकासे पुलमा झु*ण्डिएर आ’त्मह’त्या गरेको पेनाङ्गबाट जनउद्वार केन्द्रका सचीव शंखर देब आचार्यले बताएका छन् । मृ’तकका सहकर्मी साथीहरूका अनुसार पारिवारिक कलहका कारण मृ’त्यु बरण गरेको हुनसक्ने बताए।
साथीहरूका अनुसार मलेसियामा पनि केही तेस्तो सम्बन्ध रहेको जिबित रहदा बताएको र वापसिक सम्बन्धमा आ घात पुग्दा आ’त्मह’त्या गरेको हुनसक्ने बताए। मृ’तक को मृ’त सरिर को पो’स्टमा’र्टम भैसकेको र श’व नेपाल फिर्ता गराउने तयारी रहेको मृ’तक काम गर्ने कम्पनी श्रोतले बताएको छ। मृ’तक’का परिवारमा एक छोरी, श्रीमती, बुवा आमा रहेका छ्न।
यो पनि दुवै हात नभएकी संसारकै एकमात्र पाइलट जेसिकाको सफलताको कथा
एजेन्सी । संसारमा अपांगता भएका व्यक्तिले नगरेको कुनै पनि काम छैन । सामान्य व्यक्ति सरह उनीहरुले पनि विभिन्न क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल बनाएका छन् । दुवै हात नभएकी संसारकै एकमात्र महिला पाइलट हुन् जेसिका कक्स । अदम्य साहासकी खानी उनले गोडाको भरमा
जहाज उडाएर गिनिज बुक आफ दि वल्र्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखाएकी छन् । जेसिका पाइलट मात्र होइनन्, उनी अमेरिकन तेक्वान्दो एशोसियशनकी ब्ल्याक बेल्टको उपाधि पनि प्राप्त गरेकी छन् । अमेरिकाको एरिजोनामा सन् १९८३मा जन्मिएकी जेसिकाका जन्मजात दुवैहात थिएनन् । उनकी आमाले उनलाई देखेर खुसी भन्दा पनि दुखी हुनु परेको थियो ।